5 I-imeyile yeTrend Trends ekufuneka uyithathele ingqalelo | Martech Zone
Lwesine, Disemba 11, 2014 NgoLwesithathu, uDisemba 10, 2014 Douglas Karr
Enye yezinto esihlala siyenza kukuthathela ingqalelo uthelekiso lwezithuthi zethu kunye namaxabiso avulekileyo ukusuka kwixesha elifanayo kwinyanga ephelileyo okanye kwangelo xesha linye kulo nyaka uphelileyo. Ukujonga ezakho iimetrikhi kunye nokubona ukuba uqhuba kakuhle kangakanani kubalulekile- kodwa kuya kufuneka ulungelelanise nendlela abathengi abatshintsha ngayo. Iselfowuni yenye yezo ndawo apho kuya kufuneka uthathele ingqalelo kuba amanani ahluke kakhulu ekuhambeni kwexesha.
Kule minyaka imbalwa idlulileyo iselfowuni ikhulile ilawula indawo ebonakalayo ye-imeyile. Kuvulwa, kubalwa malunga ne-50% yetotali ivuliwe unyaka wonke, yenza ukwenziwa kweselfowuni kube yimfuneko yazo zonke ii-emarketer. Nangona kunjalo, ngelixa iselfowuni inyuse ukubaluleka kwayo, i-desktop kunye ne-webmail iseyinxalenye ebalulekileyo yokuthengisa nge-imeyile. Ukukunceda ukwandisa inkqubo yakho ye-imeyile ukunxibelelana nabathengi bakho, i-infographic yethu entsha iqaqambisa iindlela ezintlanu eziphambili zefowuni ekufuneka uyazi.
Kule infographic, Iindlela ezi-5 eziHambayo eziBuyayo kwi-ReturnPath, Uya kufumana utshintsho olunomdla kwindlela yokuziphatha kosetyenziso lweselfowuni:
Ngaphezulu kwama-50% kuzo zonke ii-imeyile ngoku ezivulekileyo kwisixhobo esiphathwayo. Ngaba ii-imeyile zakho zenzelwe ukujongwa kweselfowuni?
I-imeyile evulekileyo amaxabiso aqhubeka ngokuhla njengoko sisondela kumhla weKrisimesi. Ngaba sele uthumela?
Ukusetyenziswa kwethebhulethi ngokuthelekiswa nokusetyenziswa kweselfowuni akukatshintshanga kangako kunyaka ophelileyo.
Ukwahlula abaphulaphuli bakho ngelizwe kunokubangela indlela eyahlukileyo yokuziphatha kwe-imeyile phakathi kwamaqonga nezixhobo.
Ukuba ukwimveliso ethile, uza kubona iziphumo ezahlukileyo kuneebhentshi ze-imeyile.
tags: I-imeyile evulekileyo yedesktop evulekileyoimeyile yedesktopimeyile ephathekayoiirhafu ezivulekileyo ze-imeyileiintsingiselo ze-imeyile eshukumayoimeyile ephathekayourhwebo mobileamaxabiso avulekileyo eselfowuniiintsingiselo mobileindlela ebuyayoimeyile yeethebhulethiI-imeyile yeethebhulethi evulekileyoIposi yethebhulethi